Shir looga hadlayay arrimaha gargaarka oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Shir looga hadlayay arrimaha gargaarka oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho (SAWIRO)
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka xukuumada federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuled (Khadar) ayaa maanta guddoomiyay shir si heer sare loo soo aggaasimay islamarkaana looga hadlayay arrimaha gargaarka oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Shirkaasi ayaa waxaa ka qeyb-galay mas’uuliyiin ka kala socda Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Ururka Caalamka Islaamka (OIC), xubno ka kala socday wadamada Sacuudiga, Kuwait, Qadar, kuwaas oo u kuur-galaya xaaladda abaareed ee ka taagan geeska Afrika.
Sidoo kale, waxaa dhinaca dowladda Soomaaliya kulankan muhiimka ah uga qeybgalay ra’iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka qorsheynta, wasiirka warfaafinta, wasiiru dowlaha arrimaha dibedda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka, la taliyeyaal ka kala socday xafiisyada ra’iisul wasaaraha iyo madaxtooyada.
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo hadal kooban u jeediyey wafdiga shirka ka qeyb-galay ayaa ugu horeyn uga mahad-celiyey booqashadooda iyo sida ay beesha caalamku ugu soo gurmatay Soomaaliya.
Balse ra’iisul wasaare ku-xigeenka ayaa hoosta ka xariiqay in weli loo baahan yahay gurmad deg-deg ah iyo in mashaariic horumarineed laga fulliyo dalka Soomaaliya, si loo baajiyo abaaraha soo noq-noqday, islamarkaasna shacabka loogu abuuro shaqooyin ay howlahooda ku maareystaan.
Wuxuu sheegay in dowladdu ay mudnaan gaar ah siisay arrimaha gar-gaarka oo wasaarada gargaarka iyo maareynta masiibooyinka la sameeyey oo dadaal weyn ku bixisay xiriirka iyo isku dubaridka arrimaha gargaarka.
Sidoo kale, wuxuu ra’iisul wasaare ku-xigeenka sheegay in guddiga qaranka ee abaaraha dalka uu dadaal fara badan ku bixiyay in shacabku is-gar-gaaro islamarkaasna ku guuleystay in lacag ka badan 6 milyan oo dollar ay shacabka Soomaaliyeed iska soo ururiyeen.
Ugu dambeyn, ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) ayaa ugu baaqay wafidga heerka caalami ah ee soo gaaray Muqdisho inay booqdaan xerooyinka barakacayaasha ah isla markaasna u rajeeyey inay waqtigooda ay joogaan Soomaaliya inay si wanaagsan uga xog wareystaan wasaaradaha gargaarka iyo qorsheynta, si mashaariicda horumarineed ay u noqdaan kuwo waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka.
Dhinaca kale, wafdiga heerka sare ee ka kala scoday Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Ururka Caalamka Islaamka, wadamada Sacuudiga, Kuwait, Qadar iyo hay’adaha gar-gaarka ayaa dowlada federaalka Soomaaliya ku ammaanay dadaalka ay ku bixisay sidii abaaraha loo yareyn lahaa oo suurto-galisey in laga hortagay in abaaruhu ay noqdaan kuwa ka dhasha macluul iyo nafaqo darro.